ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တုံရွာ ဆွေးနွေးပွဲမြင်ကွင်း (ရုပ်သံ)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တုံရွာ ဆွေးနွေးပွဲမြင်ကွင်း (ရုပ်သံ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 8:17 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ... ရှုင့်
တိဗက်ဒလိုင်းလာမ ဘုန်းကြီးလိုပဲ Noble ဆုရပြီးတော့ နိင်ငံရေးကအနားယူပါတယ်လုပ်ပီး အေးးအေးနေလို့ရတာပဲ
Yarzar ရေ မင်းရှင်းနိုင်ရင် ထွက်ရှင်းလိုက်စမ်းပါ ကလေကချေ စကားတွေ လာမပြောစမ်းပါနဲ့ ကို နဲ့ တန်ရာ တန်ရာ စဉ်းစားတာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ အကြံပေးပါရစေ
ရန်ကုန်က ကောင်က ဒေသခံ လိုလို နဲ့ လူအထင်ကြီးမလား လာလုပ်တာတော့ ရှက်ဘို့သိပ်ကောင်းတယ် အမေစု မိုလို့
စောက်ဆင့်မရှိ ဘဲ တပ်နဲ့ ပေးတွေ့ လိုက်ချင်တယ်-စစ်သားတွေကြည့်ပီး လက်ယားနေမှာဘဲ
အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာ မှာ သံဃာတွေ မီးရှို.သူတွေကို အရေးယူဖို.က
ထိပ်က စ ရမှာပါ ၊ ဒါ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ် ၊ အခုကာလ ဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေ အောက်က ဒီမိုကေ၇စီ၇ဖို.
ပြည်သူတွေ ကြိုးစားဆဲကာလပါ ၊ နစ်နာလို.ဆန္ဒပြသူများကို ညှာတာပေးပါ ၊ ခွင်.ပြုချက်မ၇ဘဲဆန္ဒ မပြ ဖို. မပြောစေချင်ပါ ။
ေ၇ှာေ၇ှာ၇ှူ၇ှူ ပေးတာ မရှိပါ ။
ကျွန်တော် ဒေါ်စုကို အမြဲထောက်ခံပါတယ်။ အခုအရှုပ်တော်ပုံ က တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းရမဲ့သူက မဖြေရှင်းတော့အမေစု ခံလိုက်ရပုံပေါ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့တန်၇ာကိုပြောမယ်ဆိုရင်၊ ကိုယ်လုပ်တာကို ကိုတာဝန်ယူရဲရပါမည်။ သူတပါးကိုဖြေရှင်းခိုင်းလို့မရပါ။ ကိုယ်ကစေတနာနဲ့ဖြေရှင်းချင်တောင်မှ ဝေဒနာရောက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်တိုင်ပြည်ကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုပြီး ပညာမတတ် ဆင်းရဲလူတန်းစားတွေကို လူမတူဆက်ဆံလို့မရပါ။ ကိုယ့်ပြည်သူကိုချစ်လျှင် ပြည်သူ၏ အသံကိုနားထောင်ရပါမည်။ အမှန်တရားကို ဥပဒေနဲ့လည့်ပတ် ဖုံးကွယ်လို့မရပါ။ တရားမျှတမှုကိုပေးနိုင်မှ ဥပဒေအနိသာရတက်ရောက်ပါမည်။ နိုင်ငံ့ ဖွိ့ဖြိုးဖို့အတွက် တိုင်းပြည်ရဲ့ သံယာဇာတ တစ်ခုတည်းရောင်းစားလို့ ပြည်သူတွေမချမ်းသာပါ။ ပညာရေး နဲ့ စက်မှု ပညာထွန်းကားဖို့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များက ပညာတတ် ကို မွေးထုတ်ပြီး တင်ပြည် ရဲစီးပွားရေးကို ထူထောင်တဲ့အစီအစဉ် ရေးဆွဲလျှင် သူတပါးတိုင်းပြည် လိုဖွိ့ဖြိုးမှာဖြစ် သည်။ ဒေသခံအတွက် တစ်ကယ်ကောင်းကျိုးအတွက်စဉ်းစားပေးလိုချင်လျှင်။ ၁၊ သူတို့အသက်ဆက်ရှင်သန်ရေးအတွက် ရေအရင်းအမြစ်ကို အစာထိုး ပေးရပါမည်။ မြန်မာပြည်သား၆၀ ၇ာခိုင်နုန်းသည် စိုက်ပျိုးရေးဖြင့်အသက်၇ှင်ရသည်ကို မမေ့သင့်ပါ။ စီမံကိန်းက အစားမထိုးပေးနိုင်လျင် ပြည်သူရဲ့အနာဂတ် အသက်ဘေးဆိုင်နိုင်ပါသည်။
၂။ ပြည်သူ့အတွက်နှင့် ၀မ်ပေါင် ဦပိုင် အတွက် ဆိုတာမှန်ပါသည်။ သို့သော်ညှားလည်း ဒေသခံကို ပိုက်ဆံပေးပြီးမဖြေရျင်းသင့်ပါ။ သူတို့အတွက် စီမံကိန်းနဲ့တာဝန်ဆောင်ရွက်ပေးမဲ့သူရှိမှသာ ဒေသခံဖက် က လိုးလားမှု။ နားလည်မှုရှိမှာဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ူ ကို လာဆန်ဒပြခိုင်းရုံနဲ့ပြသနာက ဖြေးရှင်းလို့မပြီးနိုင်ပါ။
၃၊မဗာပြည်မ ကြီးရဲ့ပထ၀ီအနေအထားကို နားလည်စေပါသည်။ ပြည်မရှိတောင်များရှိသစ်ပင်များသည်၊ တိုင်းပြည်၏လျှပ်စစ်မီးမလုံလောက်မှုကြောင်ထင်းဖြစ်သွားဒါ တစ်ပြည်လုံး တစ်နေ့ ထင်းဘယ်နှစ်တန်ထွက်သွားသည်ကို တောင်ကတုံးတောင်ဖြစ်သွားကုန်ပြီ. သစ်တောသည် လူ ကို အအေးဓါတ်နဲ့အောက်စီဂျင်ကို အဓိကထုတ်ပေးသည်။
ထို့ကြောင့် တောင်တစ်လုံးလုံးဖြိုပြီး သံယာဇာတ ကို ဖောက်စားမည်ဆိုလျှင် နောင်လာနောင်သားတွေအတွက် ကန်တာ့ရဖုန်တောဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။အတိတ်ကိုထားပါတော့။ ပစ်စုပန် နဲ့အနာက ကောင်းကျိုးကို ပြောလိုလျှင် ကှ်ျအချက်တွေကို ကောင်းကောင်းနာလည်ရပါမည်။လက်ရှိ ပြသနာတစ်ခုထဲကို ထည့်ပြောလို့မရပါ။ ကိုယ်ကိုအကျိုးပေးတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်လည်းထည့်စဉ်းစားရပါမည်။
မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ. ကိုယ်တိုင်းပြည်ကို တစ်ကယ်ချစ်တဲ့ လူများပေါ်ပေါက်ပါစေ။
ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာကို သေချာစွာ ဖတ်ကြပါ
Environment ကိစ္စ ဆောင်ရွက်ရန် ပေါက်ဈေးနှင့်
လျော်ကြေးပေးရန် နိုင်ငံတော်အတွက် ဝေစုပိုမို
ရရှိရန် ဒေသအတွက်အိမ်ယာ အလုပ်အကိုင်နှင့်
တတ်နိုင်သလောက် စိုက်ပျိုးမြေ ပြန်လည် ရရှိရန်
သာသနာမြေ နဂိုမပျက် အစားထိုး ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်
မီးခိုးဗုံးကိစ္စ ဆက်လက် အရေးယူနိုင်ရန် အဖြစ်မှန် ဖေါ်
ထုတ်ခြင်းနဲ့ မှားယွင်းစွာ ချုပ်ဆိုခဲ့သော စာချုပ်ကို
နိုင်ငံဂုဏ်သိက္ခာ မပျက် ကတိဂ၀တ် တည်ကြည်စွာ
ပြန်လည် အဖတ်ဆယ် ယူနိုင်မူဟာ တာဝန်ယူ သတ္တိရှိစွာ
လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အမေစု အတွက် နိုင်ငံရေးထောင်ချေက်
ကိုအောင်မြင်စွာ ကျော်လွှား သွားနိုင်ခဲ့တဲ့ မှတ်ကျောက်
ဖြစ်ပါတယ် နောက်တချက်က တိုင်းပြည် နောက်ကြောင်း
ပြန်နိုင်တဲ့ အန္တရယ်နဲ့ ပြည်တွင်းစစ် ကစားနိုင်တဲ့
အန္တရယ် တွေကိုလည်း တနည်းတစ်ဖုံ ကျော်လွှား
သွားတယ် လို့ဆိုနိုင်ပါတယ် ဒီအန္တရယ်နှစ်ခု ကိုလည်း
Uncle Chan's အမလ said...
လုပ်သမျှကို မျက်လုံးမိုတ် နားပိတ်ပြီး ဖင်ပိတ်ထောက်ခံနေ
သူများလိုတော့ အမြင့်ကြီးတွေ မပြောတတ်မဆိုတတ်ပါဘူး
ဗျာ ။ တော်တော် အဆင့်မြင့်တဲ့ ထိုသူများက ကိုပိုင်အတွေး
အခေါ်မရှိပဲ မတန်မရာ ပြောဆိုနေကျပါလားလို့ ကိုနဲ့တန်
ရာတန်ရာကို တွေ့လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်ဗျို့ ။ အမေစုလုပ်တာ မထောက်ခံတဲ့ စကားတလုံးနှစ်လုံးများ
ပြောလိုက်မိတာနဲ့ အမေစုလို လုပ်နိုင်လား ရှင်နိုင်သလားနဲ့
... မေးပါအုံးမယ် အမေစု လုပ်နေတာတွေက ဘယ်ခရီးေ၇ာက်လို့ ဘာတွေများသိသိသာသာကြီး အလုပ်
ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပြီလဲ ။ အခုဆိုရင် အမှန်တရားဆိုတာ
တောင် ဖင်ကြားညပ်ပြီး ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်နဲ့ ဖြေတတ်
ပြောတတ်နေပါပေါ့လား။ စစ်သားကို မဟုတ်တာပြောရင်
တိုင်းဖျက် ပြည်ဖျက်သမား ပုဆိန်ရိုးလို့ အပြောခံရပြီး
အမေစုထိတော့ အတွေးအခေါ် အဆင့်အတန်းနိမ့်တဲ့
ကလေကချေလို့အပြောခံရတယ်။ အခု အမေစုအမေစု
နဲ့ ဖင်ဖြဲ အော်နေကျတဲ့ကောင်တွေကော မေးပါအုံးမယ်
မင်းတို့ စောက်ဆင့်ကော ဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ စောက်
ဆင့်မရှိ စောက်အမှန်တရား မသိလို့ တဦးတယောက်ကို
ပဲ အာဗျဲလျှာဗျဲ ထောက်ခံတတ်တာ အဆင့်ရှိတာတဲ့လား။ောာပဲလို့ ပြောချင်တယ် ကျေနပ်ကလား...
မင်းပထွေး စစ်ခွေးတွေကို ဒီထဲလာပြီး လွမ်းပြမနေပါနဲ့ အပေါ်က နွားရ။ စစ်သားတွေ ပါးရိုက် နားရိုက်လုပ်တာကို ဘယ်နခါလောက်ခံဖူးပြီးပြီလဲ ၊ တပ်က ကောင်တွေ ပါးရိုက်တာကို ခံဖူးထားတယ်နဲ့တူတယ် တော်တော် အရသာတွေ့နေတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား။ စစ်သားမှမဟုတ်ဘူး ဟေ့ကောင် သာမန်ပြည်သူတွေထဲမှာလဲ စစ်သားထက် လက်သံပြောင်အောင် ပါးရိုက်နားရိုက် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ကောင်တွေရှိပါတယ်ကွ မင်းဖအေတွေကို ပဲ အားအားရှိ လွမ်းပြမနေပါနဲ့ကွာ။
March 15, 2013 at 12:52 AM
တော်တော်စောက်သုံးမကျသော မြဆိုးဆိုသူ စစ်နွားကို ရည်ညွန်းသည်။
ဒေါသစရိုက် အားကောင်းနေစဉ်မှာ အမှန်အမှား မခွဲခြားနိုင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်....
I love Latpadaung Taung as my native land. After reading news paper I was also angry upon investigation commission and DawSu for this moment. And then I have read their report again and again. After that I've got some hidden massage and afew precious point of view. In can change my mind alittle.
I noticed that even it was right or wrong, DASSK speaks very straight as her believing and do honestly. I respect that such kind of her practices. Actually, it was hard to solve such kind of state level problem to get win-win situation that start to caught fire by former military government. She dare to go this problem area after two days of announcement. This manner of attitude shows her responsibility upon her decision. I believe that she try the best at all to get mutual benefit or contents according to her authority, ability, wisdom. There is no perfect person who can fulfill everybody wants. In this moment, I am trying to control my anger, to see right clear vision with broad minded. Wishing everybody peaceful and fulfill their needs especially Latpadaung people.
IQ EQ CQ ပြည့်ဝသောသူ အတွေးအခေါ်ရှိ ချင်ချိန်နိုင် သောသူများ များများပေါ်ပါစေ
အပေါ်က ကို ငဘ ပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒေါ်စုအနေနဲ့ ဒီစစ်အာဏာရှင် အဟောင်း အသစ်တွေကို ပခုံးနဲ့ထမ်းတင်နေတာကို တော့ ရပ်တမ်းကရပ်သင့်နေပါပြီ။ ဒါကိုသင်ခန်းစာယူသင့်နေပါပြီ။
အခု ဆိုကြည့်ပါ၊ သမတ ဦးသိန်းစိန်က ကမ္ဘာပတ်ပြီး တောင်းရမ်း ရှောင်ပုန်းနေချိန်မှာ ဒေါ်စုက သူနဲ့ ဂိုဏ်းတူ ပလင်းတူ ဘူးစို့တွေ ရှုပ်ထားသမျှ လိုက်ဖြေရှင်းပေးနေရတယ်။
တရုတ် ကုမ္ပဏီ ကို ဆက်လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ နေရာပျက်စီးပြီလို့သာ စိတ်ချလိုက်ပါတော့၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တရုတ်ဆိုတာ တခြားနိုင်ငံတွေမပြောနဲ့ သူ့နိုင်ငံမှာတောင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ လိမ်ညာ လှည့်ပတ် အတုလုပ်တဲ့ နေရာမှာလည်း နှစ်ယောက်မရှိပါဘူး။ အခုဆို ဘေဂျင်းမှာ လေထု အရမ်းညစ်ညမ်းနေတာ၊ ဓါတုပစ္စည်းတွေ မြစ်ထဲစွန့်ပစ်လို့ ဟိုတစ်နေ့ကပဲ ဝက်တွေ အစုလိုက် အပြုံလိုက်သေတာ စသဖြင့် စသဖြင့် အများကြီးပါပဲ။ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေ ဟာလည်း ဘယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာတဲ့ တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ မှ Mining and production လုပ်လုို့ မရပါဘူး။ အာဏာရှင်ကြီးစိုးတဲ့ အာဖရိကနိုင်ငံတွေ၊ လစ်ဗျား ကွန်ဂို စသဖြင့်၊ မြန်မာ စတဲ့ သူတို့လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့ရတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ပဲ လုပ်ကြရပါတယ်။ အနှစ်ချုပ်ရင်တော့ ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုးဆိုပြီး လူကြားကောင်းအောင် ဆိုင်းဘုတ်တွေထောင်၊ တိုင်းပြည်ကို ရောင်းစားသွားတဲ့ အရှေ့ က တိုင်းပြည် သစ္စာဖောက် စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ လက်ချက်ပါပဲ။ သူတို့ ကို တရားခွင် မပို့ နိုင်သရွေ့ Justice ကင်းမဲ့ နေဦးမည့် အပြင် မြန်မာပြည် ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာမည် မဟုတ်ပါ။
ဘယ်သူ့ကိုမှကောင်းတယ် မကောင်းဘူးလို့မပြောခင်အရင်းဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ကြပါလို့သာပြောပါရစေ ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဗဟုသုတများများရကြပါစေ
တိုင်း မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး လက်မခံနိုင်ပါ။မမှန်ပါ။ အမေစု အခု ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ဘက်ယီမ်းနေပီး၊ အကာအကွယ်ပေးလွန်းနေပါတယ်။ အမေစု လွှတ်တော်ထဲအကျယ်ချုပ်ကျနေသလော? တယုတ်ကြီးကိုရောကြောက်နေပီလော?? အခု စီမံကိန်းက ၀မ်ပေါင်နဲ့ ဦးပိုင် အတွက်ဘဲအကျိုးများလှတာပါ။ တိုင်းပြည်နဲ့ဒေသခံတွေအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ကမပြောပလောက်ပါ။ အမေစု မျက်နှာကြီးရာဟင်းဖတ်ပါတယ်။ အမေ အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး။
ဒေါ် စု ကို မဲ နိုင် အောင် မဲ ပေး ရ တဲ့ ပြည် သူ တွေ ယ နေ့ အချိန် ထိ ဒေါ် စု ကို မဲ ပေး
လို့ ဘယ် လို ဒု က္ခ ခံစား နေ ရ တယ် ဆို တာ ကွင်း ဆင်း လေ့ လာ ပြီး မှ နိုင် ငံ ရေး
လုပ် တာ အ မုန်း ခံ ရ မှာ ပဲ ဆို တဲ့ စကား ကို သုံး သင့် ပါ တယ်။NLDကို မဲ ပေး ခဲ့
သူ မှန် သ မျှ ဟာ နိုင် ငံ ရေး သ မား အတိုက် အ ခံ ဖိုက် တာ ချီး ထုတ် တွေ ဟု သတ်
မှတ် ကာ အ မြဲ တမ်း ဖမ်း ဖို့ စောင့် ကြည့် ခံ ရတာ အနယ် နယ် အရပ် ရပ် ဖြစ် နေ တာ ယ နေ အ ချိန် ထိ ပါ ပဲ။မီး လောင် ဗုံး ဆို တော့ မီး ခိုး ဗုံးပါ လို ပြန် ငြင်း နေ မဲ့ အစား
လက် နက် သုံး ဖြို ခွင်း လောက် သည့် အကြမ်း ဖက် ဆ န္ဒ ဖော် ဖြစ် ပေါ် နေ မနေ
သုံး သပ် သင့် ပါ တယ် ။တ ခြား နိုင် ငံ တွေ မှာ နေ အိမ် ဆိုင် ခန်း ဖျက် ဆီး တာ ကား
မီး ရှို့ တာ ခဲ လက်နက် တွေ နဲ့ ပြန် လည် တိုက် ခိုက် တာ တောင် မီး လောင် စေ သော
ဗုံး ကို လုံးလုံး အသုံး မပြု ခဲ့ ပဲ နိုင် ငံ တ ကာ မျက် မြင် ပါ ပဲ ။ ထိုင်း ဆေး စာ မှာ
ဓာ တု ဆေး အသုံး ပြု ထား တယ် လို့ ဖော် ပြ တာ တောင် ဘာ ကြောင့် ပြောင် ညင်း
တာ လဲ နေ ရာ မ ရ ခင် က လူ ထု ကို မလှည့် စား ပါ ဘူး ဆို တဲ့ မေး ခွန်း ပြန် အမေး
ခံ ရ တာ နည်း ပါ တယ် ။ အိပ် နေ တဲ့ သူ တွေ ကို အကြမ်း ဖက် နှိမ် နင်း တာ လုပ် တဲ့
သူ တွေ မ လွဲ မ ရှောင် သာ လို့ လုပ် ရ တာ ပါ ဆို တဲ့ ဥ ပ ဒေ ရှိ ပါ သ လား။ ဥ ပ ဒေ
အ ထက် မှာ အာ ဏာ ပိုင် တွေ ရှိ ပါ သ လား လွှတ် တော် ကိုယ် စား လှယ် တွေ က
အ စိုး ရ အ ဖွဲ့ ကို ကာ ကွယ် ဖို့လား။တောင် လို ချင် တယ် လို့ ပြော တဲ့ အ မျိုး သ မီး
ကို တောင် က ဘာ လုပ် ဖို့ တုန်း ပြန် မေး လိုက် တဲ့မေး ခွန်း က ကိုယ့် မြေ ကိုယ့် ရေ
သံယောဇဉ် ကင်း မဲ့ တာ ဟန် ဆောင် နေ လို့ မ ရ ပဲ စိတ် ရင်း အ မှန် ပြ လိုက် တာ ပဲ
သ ဘာ ဝ ပတ် ဝန်း ကျင် ရေ မြေ တော တောင် ကောင်း မှ မိုး လေ ဝ သ မှန် မည် မိုး
လေ ဝ သ မှန် မှ တောင် သူ လယ် သမား စိုက် လို့  ပျိုးလို့ ရ တာ မ သိ ရော့ လေ
သ လား။ မြန် မာ ပြည် မှာ ရာ သီ ဥ တု နှစ် မျိုး ပဲ ဖြစ် ပေါ် နေ တာ တောင် သတိ မ ထား မိ့ ဘူး လား ဗျာ နွေ နဲ့ ဆောင်း ပဲဖြစ် နေ တာ ကြာ ပြီ ။ တောင် သူ လယ် သ မား
တွေ နှစ်လုံး သုံး လုံး တစ် လုံး မ ထိုး ကြ ဖို့  ပြော တာ လက် ခံ ပါ တယ်။ နှစ် လုံး သုံး
လုံး ကို လိုင်း ကြေး ယူ ပြီး ခွင့် ပြု သူ တွေ က တရား ဥ ပ ဒေ အ ရ လုပ် ဆောင် နေ ပါ
သ လား ။
စစ် ကောင် တွေ စီ မံ ထား တဲ့ လူ ထု နဲ့ သွေး ခွဲ တဲ့ အကွက် ထဲ ဘာ လို့ ဇွတ် တိုး ဝင်
တာ လဲ စစ် ကောင် တွေ အော င် ပွဲ ခံ သွား ပြီ နေ ရာ ဆို တာ လူ ထု တင် မြှောက်
မှ ရတာ နိုင် ငံ ရေး လုပ် ရ င် အ မုန်း ခံ ရ မှာ ပဲ ဆို တော့ မုန်း မှတော့ မဲ ဘယ် လို ရ
မှာ လဲ ။ပြည် သူ လူ ထု နော က် မှာ မား မား မတ် မတ် ရပ် ပေး မှန်း သိ ရက် နဲ့ လူ တ
စု ကောင်း စား ဖို့ ထောင် ချောက် ထဲ ဝင် တာ လဲ နောက် ကြောင်း ပြန် လှည့် တာ
တွေ မ ပြော နဲ့ တောင် ပေါ် မြေ ပြန့် သွေး ခွဲ လို့  မ ရ တော့ ဘူး အား လုံးစည်း လုံး
သွား ပြီ တစ် ပြိုင် နက် တည်း လက် တွဲ ပြီးတွန်းလှန် လို့ ရ နေပြီ။အား လုံး ဟာ
မျက် စီ့ ပွင့် နား ပွင့် လာ လို့ အ ကျဉ်း စံ ဘဝ က လွတ် အောင် လုပ် နိုင် ခဲ့ တာ ပေါ့
ဒါပေမဲ့ အန်တီရေ လက်ပန်တောင်းတောင်ကြီး ဖျက်ဆီးခံလာရတာကြာပါပြီ ဒီစီမံကိန်းဆက်လုပ်လို့ ဘ၀ပြောင်းလောက်အောင် အကျိူးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ တမျိူးပေါ့အစိုးရချင်းမျက်နှာမပျက်ချင်လျှင် ပြည်သူ
နဲ့တော့မျက်နှာပျက်ရလိမ့်မယ် ဦးပိုင်ကိုတော့ထည့်မ တွက်တော့ဘူး ပြည်သူ့အကျိူးကိုဘယ်တုန်းကမှ ကြည့်ခဲ့တာမဟုတ်လို့ဒင်းတို့ကို မသာချထားပြီးပြီ
ဦးဝင်းတင်ကြီး ပြောသလို အန်တီက စစ်အစိုးရကို
နစ်နာသူပြည်သူဘက်ကခံစားပေးပါ မြန်မာပြည်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီစီမံကိန်းကိုဆက်မရှိစေချင်ပါ
LITTLE BURMA GROCERY said...
အမေထု ဒေါ်ထု ကောင်းကောင်းပြောရင် ပြည်သူတွေက
တသွေမတိမ်းလိုက်နာကြမဲ့သူတွေပါ။ အခုတော့ ပွဲမစခင်ထဲက လူထုကို တရာခံပြောပြောနေတော့ မတရားမှုတွေကို ခါးစည်းခံနေရတဲ့ ပြည်သူတွေ ဘယ်လို ခံစားနေကြရမလဲလေ..တကယ်တော့ အမေထုကို သူတို့တွေသိပ်ချစ် သိပ်ကိုတန်ဖိုးထားနေခဲ့တဲ့ သူတွေပါ။ အမုန်းခံမှ နိုင်ငံရေးသမားကောင်းပီသမယ်ဆိုယင် ဘာလို့များ အာဏာရှိသူတွေ ခရိုနီကြီးတွေရဲ့ အချစ်ကိုတော့ သိပ်လိုချင်နေရတာလဲ... အဖြေကရှိပြီသား သိပြီးသားပါ မဖြေပါနဲ့တော့...
ဦးသန်းရွှေကို လွမ်းတယ်ဗျာ ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်လာခဲ့ပါအုံး အဘရယ် ဒီခွေးမသားတွေကို ဒီအတိုင်းပစ်မထားပါနဲ့
ဟုတ်ပကွာ.ပြည်သူတွေက စစ်တပ်ဆိုရင် အ သေမုန်းပြီး
ဒီမိုက ရေစီ ကို အားလုံးလိုချင် သူချည်းပဲ။
ဒါပေမဲ့ ဒီလို နေရာ မျိုးမှာ ဒီလို လူစားမျိုးတွေကိုတော့
အရင် စစ်အုပ်ချုပ် ရေးနဲ့ ပဲ အ သေသတ် ခိုင်းချင် တယ်
ဟေ့ကောင် လူလိုပြော ခွေးလိုမ ဟောင် နဲ့။
အဓိက တရားခံက နောက်က နေ ကြိုးကိုင် နေတဲ့
မင်း ပ ထွေးတွေ။ ပိုက်ဆံရလို့ နာမည်လဲ ရဖို့
ဝင် ယုတ်မာကြတာက နော်အုံးလှ,ရွာသူမ သွဲ့သွဲ့ခွေး
လို ခွေးမမျိုးတွေ,ဘေးက နေ ဟောင်ကြတာက
မြ အေး နဲ့ ခွေးတချို့ ။ အဲဒီ တိရစ္ဆာန်တွေကိုသာ ရှင်းပစ်
အေးဗျာ ဒီအကြံပြုတာလည်း ဟုတ်သလိုဘဲ နောင်တော်ကြီးရေ
လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုပ်လုပ်
ဦးမင်းကိုနိုင် လုပ်လုပ် ၊အခြား ဘယ်လို ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလုပ်လုပ်
လူအများက မှားတယ်ဆိုရင် မှားလို.ပါ ၊ အစစ တိုးတက်လာတဲ. ခုကာလမျိုး မှာ ပိုပြီး အမှန်တရား ကိုဖုံးကွယ်ဖို.ခက်ပါတယ် ။ ပြည်သူ.အသံကအဓိကပါ ၊
အဓိက က လူအများလက်မခံရင် အဲဒါကို ဆက်မလုပ်ဖို.
လိုပါတယ် ၊ လူအချင်းချင်း တန်းတူ အခွင်.အရေး ရှိရပါမယ် ၊ တိုင်းပြည်သယံဇာတ ကို(အစိုးရအပ) ယူလိုရသူ ၊ယူလိုရတဲ.အဖွဲ.က ၀င်ယူတယ် ၊ နိုင်ငံတော်
အကြီးအကဲ အဖွဲ. အစည်းဆိုတာတွေကလည်း မပြောရဲ
မဆိုရဲ ကြည်.နေရတယ်ဆိုတာ မျိုးက နိုင်ငံတော် ကို
အုပ်ချုပ်သူတွေလည်း သမိုင်းကြောင်း အမည်းစက်ဖြစ်
သွားမှာပါ ၊ ကျနော်.အမြင်ကတော.ဒီကိစ္စ ပြသနာတွေဟာ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား
သစ္စာဖေါက်မှု ၊အမှန်တရားကိုဆောင်ရွက်၇န်မ၀ံ.၇ဲမှု ၊
အလို၇မက်ကြီးမှုတွေ ကြောင်.ဖြစ်ရတာလို.ပြောချင်ပါတယ် ။ ။ ။
အဓိက က ပြည်သူ.တွေ၇ဲ.အသံ ကိုနားထောင်ပါ ၊ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်တဲ.
ပြည်သူတွေကို လက်နက် အားကိုး နဲ.မလုပ်ဖို.ပါ ။
လူ ၁၀၀ လောက်စုအော် ရင် ပြည်သူ့ အသံ ဖြစ်ကောလား တနိုင်လုံး စရင်းကောက်ကြည့်ပါ့လား ဒီလိုသာဆိုရင် ဘာမှ ကို လုပ်ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး
ဒေါ်စု ဖြေရှင်းနေပုံက တရားခွင်မှာ တရာခံရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း လျှောက်လဲချက်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေတယောက်လို ဖြစ်နေသလိုပဲ။ တဖတ်သား ဘာမှ ပြန်ပြီး မချေပနိုင်အောင် ဥပဒေဆိုတာကြီးကို ရေပတ်မ၀င်အောင် သုံးနေလိုက်တာလဲ မပြောပါနဲ့တော့။ ပြည်သူတွေ ဘာမှန်းမသိလိုက်ချိန်ကပဲ ထုတ်နှုတ်အတည်ပြုလိုက်တဲ့ မတရားဥပဒေတွေကို သုံးပြီး မတရားတာကို တရားပါတယ်ဆိုပြီး ဖင်ပိတ်လို့ ညင်းပေးနေတာလား မေစုရယ်။ နိုင်ငံရေးပါးမ၀သေးတဲ့ လူမှုရေးကွန်ရက်က ကောင်တွေကလဲ အချိန်အခါကို မကြည့်ပဲ အာသွားကျယ် တောင်သူတွေဆိုတာကလဲ မပြောတတ်မဆိုတတ် မတရားတာကိုပဲ လက်ညိုးထိုးလို့ပဲ ပြောတတ်တာဆိုတော့ ...အင်..။ ဖင်ချွေးပြန်အောင် ဥပဒေတွေသုံးလို့ ရှေ့နေလိုက်ပြီး ဟိုက ဘာမှမသိဘူး လက်မခံဘူးဆိုတော့ကာ ဒေါသထွက်လို့ အမောကြီးမောသွားရှာတဲ့ မေစု ...ဒေသခံတွေ ရွာခံတွေကို ခေါ်ပေးပါတဲ့...တိန်!!